Samsung Gear S2 ukubuyekeza: seventh time lucky for Korean firm's smartwatch - Izindaba Rule
Samsung Gear S2 ukubuyekeza: okwesikhombisa lucky for SmartWatch Korean nkampani
Omunye umzamo lwesikhombisa Samsung ekugcineni aqhephukile it. Gear S2 iyona SmartWatch best ngokuqinile Korean esenze - futhi ngamamayela. Kuba njalo omunye best kuyatholakala, wethula izindlela ezingcono ngobuqotho of uxhumana nge SmartWatch.
Lesi sihloko osesikhundleni “Samsung Gear S2 ukubuyekeza: okwesikhombisa lucky for SmartWatch Korean nkampani” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoMsombuluko 9 Novemba 2015 11.26 UTC
Samsung uye ekugcineni aqhephukile SmartWatch nge nomklamo walo yesikhombisa: a round iwashi iyahambisana cishe zonke Smartphones Android ne Bezel ligijima lokho ukubukisa nje.
smartphone nomkhiqizi enkulu kunazo zonke emhlabeni has eziningi nakho ngokwenza smartwatches. Its wokuqala wethulwa 2013, kodwa kusukela ngaleso sikhathi le nkampani South Korean esenze onobuhle eziyisithupha ezahlukene, Nokho akekho kubo babe impela got it right.
Gear S2 kuyinto ngizame Samsung sika lwesikhombisa, kwaba kuwufanele umzamo.
Round futhi ekhangayo
I njalo-on screen wokushintsha umbukiso ephansi amandla uma kungenjalo ngenkuthalo asetshenziswayo, efanayo esetshenziswa Wear amawashi Android ye-Google. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokungefani nazo zonke odlule Samsung smartwatches, Gear S2 kuyinto slim, round futhi ekhangayo. Iza onobuhle ababili "Classic" futhi standard. I ihlolwe Gear standard 2.
Kubukeka sengathi a Iwashi lesimanje round nge engagqwali umzimba futhi ukubunjwa plastic mhlophe noma lube mnyama wayibhinca. A ligijima bezel izindandatho screen crisp 1.2in AMOLED, okuyinto inenani pixel kwabantu kusezakuba round SmartWatch at 302 Amaphikseli inch per. esiseduzane round esincintisana yaso 286 ppi Huawei Buka, okusho Samsung ishaya bonke kodwa square 42mm Apple Watch, okuyinto Ubuye count 302ppi kwe-pixel.
Isikrini kuyinto enhle: crisp, acacile nge abansundu amnyama ngempela, ezivuma iwashi dark ubhekene okuhle ikakhulu looking. Efana Android Gqoka ungashintsha ubuso eziyisisekelo emhlophe-on-black uma ayisebenzi. Akukona isixazululo eliphezulu njengoba ubuso main, kodwa akusho ahlupheke pixelation ngempela kangaka amabi njengalezo ezazisetshenziswa Moto 360.
I wokubuka 11.4mm aminyene, kodwa ubukeka slimmer nalapho igqoke sibonga umzimba banana futhi design tapered. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Umlindo uhlezi kamnandi esihlakaleni. tapered body design ulingisa Its ukuthi ephezulu ekupheleni amawashi awayindwayo asifihle abanye kubalindi sika 11.4mm ukujiya. Kuba futhi entweni engangeni manzi ezindinganisweni IP68, okusho yithela ngawo akuyona inkinga.
The wayibhinca enjoloba eliphakeme futhi akazange enze isihlakala sami umjuluko njengoba abanye Casios esikhathini esedlule. It agcinwe endaweni ngumuntu nokuphathelene push-inkinobho isiqeshana, okwenza kube lula ukususa, kodwa kusho uzoba kusetjenziselwe ezizibeni olunikezwa Samsung.
Zimbili in the box, esisodwa esikhulu futhi omunye wayibhinca ezincane ukuthi kunciphisa kubalindi ukujula esihlakaleni. Gear S2 Classic has bendabuko nilindile lugs for ezizibeni standard.
Ngemuva silindile has a qapha inhliziyo rate, njengayo yonke eminye smartwatches kakhulu, okungase ngesandla abangelwe ukuba alobe beats yakho ngomzuzu, noma esetshenziswa njengengxenye tracker ukuzivocavoca. Ngakuthola olunembile ngaphakathi abayibhiliyoni beat ngomzuzu.
Ezizibeni kulula ushintshashintsha out, kodwa ubhekene kungagcini ngokuthi yini ongase uyithole kusuka Samsung sibonga nokuphathelene isiqeshana uhlelo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Amagama: Samsung Exynos 3250
Screen: 1.2e sAMOLED (302ppi) lesafire
Ukuxhumana: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Barometer, sokushaya kwenhliziyo inzwa
Kushesha ngoba ngelinye ilanga nengxenye
Amancane magnetic ukushaja ukuma kwentambo uyala silindile, ukukhetha ukubonisa Watchface noma ukushaja inqubekela. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Gear S2 uzizwa kushesha futhi basabele operation. It uxhuma smartphone nge Bluetooth noma nge-Wi-Fi, kanye inethiwekhi ibilokhu amisiwe. Ngokungafani nezinye Samsung Tizen smartwatches, Gear S2 ngeke sisebenze yimuphi smartphone zanamuhla Android, usebenzisa umbhangqwana Gear nokuphatha izinhlelo zokusebenza.
Kunamaphuzu imisebenzi embalwa eyenziwayo adinga idivayisi Samsung, okungukuthi Samsung Pay okuvumela abasebenzisi ukuba akhokhe imali enkulu ngenxa okuhle kanye namasevisi nge-NFC nilindile. Samsung Pay nokho ukuqalisa in the UK, kodwa itholakala e-US kanye South Korea.
Uxhumano Bluetooth esenamandla lapho uxhumeke Nexus 6P, ngenkathi i-Wi-Fi kwaba lula usethe ngokuthinta iphasiwedi ne Akumangalisi useable T9-style on-screen ikhibhodi. Izaziso zazinikezwa owavele-Wi-Fi, okuyinto akulona icala lazo zonke smartwatches njalo.
Gear S2 lasted 36 amahora ngecala screen ngaso sonke isikhathi. I lokubuka kuza ngedokhi wireless ukushaja, okuyinto uyala it in ngaphansi amahora amabili.
Tizen, hhayi Android Wear
Ukukhethwa ubuso kuhle, futhi iningi kungenziwa egcizelele. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
isofthiwe Gear S2 sika kanyekanye amandla eyaqopha nobuthakathaka enkulu. Ngokungafani nezinye amawashi Android agijima Wear ye-Google Android, the S2 ugijimela siqu uhlelo Samsung sika eqhuba Tizen.
Isofthiwe inkambiso futhi ligijima bezel kwenza S2 omunye esheshayo futhi elula ukusebenzisa smartwatches. Ukusonta kwesobunxele yezaziso, kwesokudla for amawijethi ngoba izinto ezinjengalezi ukulawula umculo, isilinganiso senhliziyo, ikhalenda, izibuyekezo sezulu kanye ukufaneleka. Ngokuswayipha phansi esuka phezulu uya emuva isinyathelo esisodwa, noma ukudansela isiginci sakhe phansi okusheshayo izilungiselelo umthunzi phezu iwashi.
A little ezintathu-dot menu ithebhu liyavela kwesokudla yini izenzo eminye, kanti inkinobho ezincane ohlangothini kukuthatha zokusebenza kanye inkinobho ezinkulu ukuze abuthele iwashi. Ukumboza nilinde kanye isandla sakho ikubeka ubuthongo. Konke usebenza kahle futhi intuitively.
Vula Bezel ukukhetha lokusebenza. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ezinye izinhlelo zokusebenza agcinwe ohlwini isiyingi, kodwa izinhlelo zokusebenza udaba enkulu kunazo. Ngenxa uhlelo lokusebenza Tizen kukhona ngokuyisisekelo akuzona yimuphi ngaphesheya yibo kuhlanganisiwe. Ufanele CNN, Bloomberg, Lapha Ibeka kanye iqoqo Samsung zokusebenza, kuhlanganise S Health and izwi rekhoda.
Izinhlelo zokusebenza ezifakiwe umsebenzi omuhle, kodwa ukuntuleka choice is Ngeke fixed noma nini ngokushesha njengoba base umsebenzisi elincane Tizen kusho alikho okuningi draw for onjiniyela empeleni ukudala kubo njengoba kukhona Android Wear futhi Apple watchOS.
Zikhona nezimfanelo ezingavamile zomunye kuxaka uhlelo. Ngokwesibonelo, nye bhekana iwashi abakhuthele futhi kungenziwa yasentabeni ukwenza imisebenzi. Ngokushaya phezulu phansi chronograph ubuso ubeka off a isitophuwashi, kodwa awukwazi ukuqala timer noma usethe i-alamu. The timer futhi ayinayo widget ngasizathu simbe, lapho alamu enza.
Samsung sika S-Voice isebenza kahle Isilinganiso yokuqondisa kanye neminye imisebenzi okusheshayo, kodwa Ngazama ngizama ukuba zilawule impendulo Hangout. Ikhibhodi-screen isebenza for izinto ezisheshayo, kuyilapho Bezel ligijima kwenza kube lula ukuba ukhethe emoji sisheshe ukuphendula.
uhlelo Samsung sika S-Voice isebenza kahle ngokwanele ukuze uthole Isilinganiso sibekandzaba alamu, kodwa akuyona akamuhle kangako njengoba Google Now noma Apple Siri. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Samsung Gear S2 kubiza £ 249 in gray dark noma isiliva. Gear S2 Classic kubiza £ 299 black. Bobabili ayatholakala for pre-oda, ukuthumela on 12 November.
Ziyakwazi on the high-ekupheleni ubakaki amanani for amawashi ne-Android. The itshana Isikhathi kubiza £ 180, the motion 360 £ 229 futhi Huawei Buka £ 289. The Apple Watch kubiza £ 299.
Kunenkolelo emuva ngenxa yokuswela Tizen sika ukwesekwa lokusebenza onjiniyela, okuyinto kubonakala kungeke kushintshe, kodwa ngokuseseka kwawo of okungaphezu nje Smartphones Samsung Android yisinyathelo ohlangothini olufanele.
Yini-ke akunjalo enza kahle, kungcono nje akamuhle okudingeka bashintshashintshe ngayo njengoba ezinye smartwatches.
Buhle: ntofontofo, omuhle ligijima bezel isikhombimsebenzisi, ububanzi ukuhambisana Android, waterproof, isihenqo esikhulu, NFC
Bawo: limited lokusebenza ukweseka, ezizibeni nokuphathelene, S-Voice kunabayeni Google Now, akukho ukwesekwa cross-platform
Izilawuli Umculo ungakusiza uqonde ukuthi afinyelelwe ngokushesha kabili ngokucindezela inkinobho encane, njengoba can nanoma iyiphi enye insiza ngokushintsha izilungiselelo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ukubuyekeza itshana Isikhathi: kangcono kwi Android kuka iPhone
Motorola Moto 360 (2015) ukubuyekeza: lokho original okufanele baye
Apple Watch ukubuyekeza: hardware amahle spoilt by isofthiwe eziyinkimbinkimbi
Samsung Gear S ukubuyekeza: angakhiphani SmartWatch nge phone esakhelwe in buyisela smartphone?
Android, Isigaba, Gadgets, Izibuyekezo, Samsung, Samuel Gibbs, Smartwatches, Technology, ubuchwepheshe obugqokekayo
← Five Mars ezitholwe aguqula ukuqonda kwethu le planethi ebomvu The smartphone umhlabeleli (2015) [VIDEO] →